လူ့ လူ လူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လူ့ လူ လူး
လူ့ လူ လူး
Posted by Kyi Lwin on May 10, 2012 in Copy/Paste | 15 comments
လု ၊ လူ ၊ လူး
မန္တလေးဂေဇက်မှ သူကြီးနဲ့ ရွာသားများ ကျန်းခန့်သာလို့မာကြပါစ။
တို့များ ရေးလိုက်တဲ့ နေရာတစ်နေရာ အတွက် အနည်းငယ်ပြန်ရေးလာတဲ့ မှတ်ချက်လေးတွေဖတ်ပြီးသကာလ အတွေးတွေပြန့်လာခဲ့တယ်။
လူ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ သူ အတွက် အတ္တကို ဦးစားပေးတတ်တဲ့သဘောကို နားလည်ပေးရမလား။ အဲဒီလို လုပ်ရပ်အတွက် ကိုယ်က ၀င်ပြောဖို့ အခွင့် အရေး ရှိရဲ့လား။ ၀င်ပြောတဲ့ ကာယကံရှင်က ဘာလဲ ဆိုတာ အဓိက လား။ ဒီမေးခွန်းတွေက တို့များကို ခေါင်းနပန်းကြီးစေခဲ့တယ်။
နေရာ ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး အခွင့်အရေးဆိုတာကိုပါ တွေးမိတယ်။ တို့များ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မကြာခဏ ဆိုသလို ကြားရတတ် တဲ့ စကား၊ လူတော်တော်များများလည်း ကြားဖူးသလို ကိုယ်တိုင်လည်း ပြောဖူးကြမှာပါပဲ။
လူတစ်ယောက်ဟာ သိပ် အတ္တကြီးကြောင်း ထင်ထင်ရှားရှားပြုမူလာပြီဆိုရင် “သိပ်နေရာယူချင်တဲ့ သူ သိပ်အခွင့်အရေးယူတတ်တဲ့သူ” လို့မှတ်ချက်ချ ပြောတတ်တဲ့စကားပါ။ ဒီလို မှတ်ချက်ချ ခြင်းအားဖြင့် အဲဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့လုပ်ရပ်ကို သဘောမတူလို့ကန့်ကွက်လို့ ရှုတ်ချ တဲ့ စကားရပ်ပဲလို့မြင်ပါတယ်။
တနည်းအားဖြင့် မရထိုက် မယူထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးကို ဇွတ် အဓမ္မယူတဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ အခါင့်အရေး ရသင့်သူအတွက် ထိခိုက်နစ်နာစေတယ်။ အခွင့်အရေးရသင့်သူအတွက် တရားမဲ့လုပ်ရပ်ပဲ။ ကိုယ့်ဖို့တဖို့ထဲကြည့်ပြီး မရသင့်နဲ့အရာ မယူသင့်တဲ့ အခွင့်
အရေးတွေကိုယူတတ်တဲ့ အကျင့်တွေ လုပ်ရပ်တွေ ကြောင့် တုိ့များမှာ တိုင်းပြည်နဲ့ချီပြီး အကြီးအကျယ် နစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။
ကိုယ့်ဖို့ပဲကြည့်ပြီး ကိုယ်ရရင်ပြီးရော ဘယ်သူတွေ ဘာဖြစ်ဖြစ် လို့ တွေးတတ် လုပ်တတ်တဲ့ လုပ်ရ့ပ်တွေကအသေးအဖွဲက ကိစ္စ က စ
လို့ ကြီးမားကျယ်ပြန့်တတ်တာ သဘာဝပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း အမှိုက်ကစ ပြဿဒ် မီးလောင်ဆိုတဲ့ စကားပုံ ဖြစ်လာတာပေါ့။
လူ့ အတ္တစိတ် တိုတာ လူတိုင်းမှာပါလာတတ်တဲ့ မွေးရာပါ ရယူချင်စိတ် ပဲ လို့မြင်တယ်။ လူ့ စိတ်အလိုအတိုင်းသာ နေကြရရင် ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်မလဲ။ လူ ဆိုတာ တစ်ဦတည်း တစ်ယောက်တည်း နေတဲ့ သတ္တ၀ါ မဟုတ်လေတော့ ကိုယ်ဖြစ်ချင် လုပ်ချင်တာ တခုထဲ ကြည့်ပြီး လုပ်လိုက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မလားဆိုတဲ့အတွေး တွေးသင့်တယ်လို့ထင်တယ်လေ။ ဥပမာ ကိုယ့်အိမ်ရှေ့
ဖုန် မထ အောင် ရေပက်မယ်တိုရင်တောင် ကိုယ်ပက်မယ့်အချိန် ဖြတ်သွားဖြတ်လာ လုပ်တဲံသူ ရှိ မရှိ ကြည့်ပြီးမှ ပက်ရမှာ လူ့ဝတ္တရား။
ကိုယ့်အိမ်ရှေ့ကိုယ် ပက်တာ ပဲဆိုပြီး ပက်ချင်တိုင်းပက်လိုက်လို့ ဖြတ်သွားတဲ့သူ ကို ရေ နဲ့ ပက်မိသွားရင် ကိုယ့်အိမ်ရှေ့ပေမယ့် သူတပါးကို ထိခိုက် နစ်နာစေတယ်။ အဲဒီလို လုပ်ရပ်ကို တရားတယ်လို့ ယူဆ သလား။ ဒါဆိုရင် ဖြတ်သွားလို့ အပက်ခံ လိုက်ရတဲ့သူ
ဟာ ကိုယ်ဖြစ်နေမယ် ဆိုရင်ကော ဒီလို အပြုအမူ ကိုဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ လူ့ကျင့်ဝတ် ဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ ဆက်နွယ်နေတယ်
အဲဒီ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကြောင့်ပဲ တခုခု ကိုယ်လုပ်လိုက်ရင် တစ်ယောက်ယောက် ကိုများ ထိခိုက်နစ်နာလေမလား။ တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကို ဒီလိုပြုမူရင် ကိုယ်ခံနိုင်မလားဆိုတဲ့ စိတ်လေးတွေက လောက ကိုအလှဆင်တာပါ။
ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွေဲကလို စိတ်ထဲကအတိုင်းလုပ်ကြည့်ရုံလေးပဲ ဆိုပြီး နောင်တ ရစရာတွေဖြစ်မှ တကယ့်ကို တောင်းပန်ပါတယ်။
ဆိုတာ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ပြောတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကတော့ ကြည့်လို့ကောင်းပေမယ့် နစ်နာဆုံးရှုံးပြီးမှ သိတဲ့အသိမို့ အကျိုးပျက်စီးစေတာပဲ။
ကိုယ်ရယူချင်စိတ် ကိုယ့်ခံစားမှုအတိုင်း လုပ်တယ် ဆိုပေမယ့် သူတပါး ရဲ့ ရပိုင်ခွင့်ကို လုယူတာမျိုးကတော့ မတရားလုပ်တာပဲ။ ကိုယ်က အဲဒီလိုလုပ်တာကိုခံစားရမယ်ဆိုရင်ခံနိုင်ပါ့မလား။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဆိုတာ ဒါမျိုးကိုခေါ်တာပါ။ သူ့လက်ထဲက သူ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းကိုလိုချင်တာနဲ့ အတင်းလုယူတယ်ဆိုတာ မျိုးက လူ့ကျင့်ဝတ်မဟုတ်ဘူးလေ။ တိရစ္ဆာန်လောကမှာ အစာလု နေရောလုတဲ့အခါ အင်အားကြီးသူက အနိုင်ရမြဲမို့လား။ အဟိတ် တိရစ္ဆာန်လောက ရဲ့ သဘာဝပါ။ လူတွေနေထိုင်ကြတဲ့ လူ့လောက လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မတော့ တကယ့်ကို ဆင်ခြင်ရမယ့် လူ့စည်းကမ်း လူ့ကျင့်ဝတ်ပါဘဲ။
လူတွေ ယဉ်ကျေးမှုကို ဘာလို့ သင်ယူရလဲဆိုတော့ မလုပ်သင့် မလုပ်အပ် တာတွေကို ရှောင်ကျဉ်နိုင်ဖို့ ယဉ်ကျေးမှုကို သင်ယူကြရတယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတခုထဲ ကိုယ့်အတ္တ တခုထဲ ကြည့်ပြီးလုပ်ချင်ရာလုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ ကိုယ်လိုချင်ရာကို
အဓမ္မ အင်အားသုံး လုယူတတ်တဲ့ အဟိတ် တိရစ္ဆာန်နဲ့ ဘာကွာခြားတော့မှာလဲ။
လူဆိုတာ လူ့ကျင့်ဝတ် လူ့ယဉ်ကျေးမှု လူ့အသိတရားတွေနဲ့ ထိမ်းသိမ်းနေထိုင်တတ် နေထိုင်နိုင်ပါမှ လူ့လောက ကိုအလှဆင်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ လူပီသ တော့ မပေါ့။
ကိုယ့်အတ္တကို ဦးစားပေးပြိး ကိုယ်မရသင့်တဲ့အရာတွေ အခွင့်အရေးတွေကို မယူကြဖို့ ထိမ်းနိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ ဇမ္ဘူတလူမှာ
လူ လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်နိုင်ပါပြီ။
” လူမှာအရေးကြီးဆုံးက ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးမှုဘဲ ဖြစ်တယ်၊ အခြေအနေ အချိန်အခါ နေရာဌါနမရွေး မှန်တာကိုသာ ပြောဝံ့တဲ့ သတ္တိရှိရမယ်။” ( တက္ကသိုလ်နေ၀င်း ရေး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုသမိုင်း စာအုပ်မှကူးယူပါတယ်။)
ဒီတော့ လောကကို အလှဆင်မယ့် လူများ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထွန်းကားလာစေကြောင်းမေတ္တာပို့လျှက် ။
၁၀. ၅. ၂၀၁၂
ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ စာသားကိုဖက်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ 15 နှစ်ကျော်လောက်က “ပန်းမြိုင်လယ်ကဦးယဉ်မှူး” ဇာတ်ကားထဲက ဘီအီးဒီအောင်သိုက် (ဘီအီးကိုဗိုက်ကလေးမဟုတ်ပါ) ကြီးက တာတီးကြီး ဦးကျော်ကို အရက်မူးနေတုန်း ဆုံးမနေတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းလေး ပြန်မြင်ယောင်မိသဗျာ…………….
ကိုဗိုက်ရေ…..ဆောတီးဗျာ….ဘီအီးဒီဆိုတာနဲ့ စာလုံးပေါင်းချင်းနည်းနည်းဆင်တော့ ကိုဗိုက်ကို သတိရသွားလို့ပါ…..
အတွေးပွါးတယ်ဆိုတာ အလေးထား မှန်စေချင်လို့ ပဲ ထင်ပါတယ်။
လောကမှာ အမှားတွေ နဲ ပြီး အမှန်တွေ ပွါးစေသောဝ်။
ဖတ်ရှုအားပေးသွားပါတယ် ခင်ဗျ ။ စဉ်းစားစရာများတွေ့ ရတာမို့ စဉ်းစားခန်း သွားဖွင့်ပါပြီ ။
ဖတ်ရှုအားပေးခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်သလို စဉ်းစားခန်းဖွင့်မယ်ဆိုတာကြောင့်ပို့လို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါ။ တို့များက ကိုယ်တွေးမိတာတွေကိုရှယ်ခြင်းဟာ တခြားသူတွေရဲ့ အတွေးတွေကို မြင်ချင်လို့ပါ။
သူ့အိမ်ရှေ့မှာ ရေပက်နေတာ ကို သူ ခမျာ ရေပက် ပျက်သွားမယ် ဆိုပြီး မဖြတ်သေးဘဲ ပြီးတဲ့အထိ ရပ်စောင့် နေတတ်သူမျိုး တွေကို လဲ ကြုံဘူးပါရဲ့။
ဒါကလဲ သွားဖို့ အရင်မလိုလို့ နေမှာပေါ့။
အားပေးသွားပါတယ် မြန်ပြည်တခွင် ကြည်ရွှင်စေချင်တဲ့ ကြည်လွင် ရေ။
တို့များတော့ သူ အရင်မလို လို့ ဆိုတာ မတွေးပါဘူး။ ကိုယ့်လိုပဲ သူ ဖြတ်ပြီးမှ ပက်ပါ့မယ်လေ လို့ တွေးတာဖြစ်ပါမယ်။
ဒါဟာ တဖက်သားကို လေးစားတဲ့ သဘောပါ။
အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်သလို့ ခုလိုမှတ်ချက်လေးတွေရေးပေးတဲ့အတွက်လည်း ၀မ်းသာပါတယ်။ လူ ဆိုတာ ကိုယ့်ဖက် တစ်ဖက် ထဲ အမြင်နဲ့ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ မှန်နေလို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးမို့လား။ လောက ကောင်းကျိုးအတွက် အပြန်အလှန် ဝေဖန်ကြမယ်ဆိုရင် အတွေးစုံ အမြင်စုံမို့ ပိုလို့ပြည့်စုံမယ်ထင်ပါတယ်။
လူဆိုဒါ အတ္တငါ့ဖို့သမားဒွေဗျ..။ ဒီမိုကရေစီလို တဦးဂျင်းလွတ်လပ်ခွင့်ရှိဒဲ့ စနစ်မှာ ပိုအခွင့်ရေး ယူဖို့လွယ်ဒယ်။ သိပ်ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားရင် စနစ်နဲ့ မကိုက်တော့ဗျန်ဘူး။ လုပ်ကြဘာလို့ ဖွင့်ပေးထားပြီး တဖက်က အများအကျိုး သယ်ပိုးဘာလို့ပြောရဒါ အတော်ဂွကျဒယ်။ အနောက်နိုင်ငံဒွေမှာဒေါ့ ဥပဒေစည်းမျဉ်းဒွေ ပြဌာန်းပြီး ဆွဲဆောင်သိမ်းသွင်းဒယ်။ ဘာသာရေး ရှုဒေါင့်ဂပြောရင်တော့ အနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့ ဟန်ဆောင်မှုဒွေပေါ့နော်..ဥပမာ- လှူတဲ့ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရဒါမျိုး.. မြန်မာပြည်မှာ သန်းချီလှူရင် သူဌေးဘွဲ့ပေးသလိုပေါ့… သေတဲ့အခါ နာမည်တပ်ပြီး ဖောင်ဒေးရှင်း ဆေးရုံကျောင်း အမည်တပ်ခွင့်ပေးဒါမျိုး..အဲဒါမျိုး ဂုဏ်ယူတဲ့အကျင့် မြေတောင်မြောက်ပေးဒါနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်နေဒယ်။ ဂုဏ်တုဂုဏ်ယောင်ပေါ့နော်…သို့သော် စနစ်နဲ့ခေတ် အံဝင်လို့ ရေရှည်တည့်တံ့ အကျိုးရှိဒယ်။ အဲဒီထဲဂမှ တကယ်စိတ်စေတနာရှိသူ လက်တဆုပ်စာ သက်သက်ထွက်လာလိမ့်မယ်။ အခုလည်းဘာထူးလည်း..လူနည်းနည်းဂလေးပဲ နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ လှူဒတ်တာမဟုတ်လား..။ အကျိုးမဲ့ဒါဂျင်းအတူတူ အလဟဿ မဖြစ်စေဒါ အကောင်းဇုံးပေါ့။ သဂျီးဂိုဘဲကျိ တနှစ်ဝင်ငွေ ဒေါ်လာငါးသိန်းရှိဒယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် လေးဆယ်ရာခိုင်နှုန်း ဒေါ်လာနှစ်သိန်း ဝင်ငွေဂွံဆောင်ရမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂေဇက်ဆိုက်ထောင်ပြီး အခွန်ပြဒေါ့ တဗျားမှ ဆောင်ဇရာမလိုဘူး။ အခွံကင်းလွတ်ခွင့် ရသွားဒယ်။ လိမ်ဒါဂျင်းအတူတူ မြန်မာပြည်အတွက် အကျိုးမရှိဘူးလား။ သူလည်းအခွံ ဒေါ်လာနှစ်သိန်းလွတ် ကျုပ်တို့ဓဒွေလည်း ပွိုင့်ကိုယ်စီရ…
ရေးပေးလိုက်တာတော့ ဗဟုသုတ ရပါရဲ့။ ဒီမိုကရေစီသော ဘာသော ညာသော သဘောတရားတွေထက် လုပ်ရပ်က အရေးပါ တယ်ဆိုတာ သိတဲ့ သူတိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တန်ဖိုးထားသူတိုင်း သတိ နဲ့ နေတတ်ကြပါတယ်။ အကွပ် မရှိတဲ့ ကြမ်း ဟာ ပရမ်းပတာ တဲ့။ အိပ် စား ကာမ ကိုယ်ရဖို့လောက်သာ သိ ရင် တိရစ္ဆာန်နဲ့ကွာတာ ဘာများရှိသေးလဲကွဲ့။ ဒါကြောင့်လည်း လု လူ လူး လို့ ကိုယ့်အတွေးကိုယ့်အမြင်ကို ရေး လိုက်ရပါတယ်။ အမြင်မတူတာတွေ ရှိမယ်ဆိုတာလက်ခံပါတယ်။ အဓိက ကတော့ လူ ဆိုတာ လူ့ယဉ်ကျေးမှု လူ့စည်း လူ့ကမ်းလေး နဲ့ နေတဲ့ လူတွေများစေချင်တဲ့ စေတနာပါ။ တချို့က မသိ နားမလည်လို့ ကိုယ့်လုပ်ရပ် ဘာလဲ ဆိုတာ မမြင်တဲ့ လူတွေ ရှိနေပါတယ်။ အသိတရားဆိုတာ အသက် အရွယ် နဲ့ မဆိုင်ပါဘူးတဲ့။ အတွေးအခေါ်နဲ့ဘဲ ဆိုင်တာပါ။ မှန်ကန်တဲ့အတွေးအခေါ် မှန်ကန်တဲ့ အမြင် မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ဆိုတာတွေက သတ္တလောက ရဲ့ အကျိုးကိုဆောင်ပါတယ်။ ဒီလို တွေပြန်ရေးလိုက်လို့ အမြင်မတူ ရန်သူဖြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ အတွေးစုံတော့ အမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ ပြဿနာ တစ်ခုကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းများတာပေါ့နော။
ကိုရင့်မလဲ အူယုတ် အဲလေ ယူရုပ် ရောက်နေလို့ မှတ်တယ်။ မြန်မာစာသတ်ပုံကျမ်းပို့ပေးဖို့များလိုလေမလား။
ဒါမှ မဟုတ် ( တိပါတယ်ဂျ။ တမင် ရေးဒါ။ ဂလောက်လည်း ဆြာ မရုတ်နဲ့။) လို့ ပြောချင်မလား။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေ။ ဖတ်ပြီး မှတ်ချက်လေးရေးပေးတာကိုဖြင့် ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။
ကိုကြည်လွင်ရေ ……… ဒီလိုစာတင်တာလေးတွေကိုသဘောကျပါတယ် ဒီစာမျုိးလေးတွေဖတ်ရင် ကိုယ့်ကို ကိုယ့်လုပ်မိကိုင်မိတာလေးတွေမှားတာများရှိသလား ဆင်ခြင်သုံးသတ်မိတယ် ……. မှန်တာကိုပြောရဲတာ ကောင်းပါတယ် ………. ညီမတစ်ခုသိတာက “မှန်ရင်ကွဲတယ်တဲ့” ဒါဟာမှန်တယ်ဗျာ ……. အူးအူးဇဂနာ တောင်မှန်လို့ မကြာခဏကွဲတယ်ချင့် ………
ကိုဇာဂနာကြီးလဲ ခုတော့ ကွဲစရာလိုတော့ဘူးလေ။ မှန် တာ ကို လက်ခံလာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကျယ်ပြန့်လာလေ အမှန်တရားဆိုတာပို ပေါ်လွင် ထင်ရှားလေလေမို့ ။ မှန် ကန်တိုင်းကွဲမှာ မကြောက်နဲ့ကွဲ့။ ကိုယ်က အမှန်တရားကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားတဲ့ စိတ် ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာ ကိုပဲ သုံးသပ်ပါ။ အမှန်တရားကို ချစ်တဲ့ သူတွေ မြတ်နိုးတဲ့သူတွေများလာရင် အမှန်တရားကလည်း လူတွေကို ချစ်မြတ်နိုးစွားနဲ့ ထွက်ပေါ်လာမှာပါ။ လောက မှာ ရေများ ရေနိုင် မီးများမီးနိုင်ဆိုတာရှိတယ်လေ။
ကဲ အသင် အမှန်တရားကိုဘယ်လောက်ချစ်မြတ်နိုးလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်မေးပေတော့။
လူမှာအရေးကြီးဆုံးက ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးမှုဘဲ ဖြစ်တယ်၊ အခြေအနေ အချိန်အခါ နေရာဌါနမရွေး မှန်တာကိုသာ ပြောဝံ့တဲ့ သတ္တိရှိရမယ်။ ဆိုတဲ့ စာကြောင်းလေးကို နှစ်သက်လို့ အဲ့ဒီအတိုင်း ပြုမူနေထိုင်သွားမယ် ဆိုလျှင် … အကျိုးရလဒ်အားဖြင် စိတ်ပေါ့ပါးမှုအပြင် ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုဒဏ်ကိုပါ အလူးလဲ ခံရနိုင်ပါတယ် ။
ခေတ်ကိုက မှန်တိုင်း မပြောသင့် မလုပ်သင့်တော့သလိုပါပဲ .. အရှေ့နောက် အကျိုးကြောင်း ဆီလျှော်အောင်လည်း ကြည့်ရသလို … အမှန်တရားကို ထုတ်ဖော်ပြောခြင်းရဲက အကျိုးသွားကိုလည်း ပြန်ကြည့်ရပါသေးတယ် … ။ ဥပမာပေါ့လေ … ကားပေါ်မှာ သူများကို ခါးပိုက်နှိုက်နေတာ တွေ့ တယ်ပေါ့နော် ဒါပေမယ့် …. ခါးပိုက်နှိုက်ရဲ့ အပေါင်းပါတွေလက်ချက်ကိုကြောက်လို့ ထုတ်မပြောရဲတာမျိုးက .. သတ္တိမရှိဘူးပြောတာထက် ၊ မိမိရဲ့ အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်တယ်လို့ပြောမလား ၊ အတ္တကိုခေါင်းစဉ်တပ်တယ်လို့ပဲ ပြောမလား .. တစ်ခုခုပေါ့ … ။
နောက်ဥပမာတစ်ခု ထပ်ပြောကြည့်ရအောင် …. ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့အတူ .. ရှောပင်းစင်တာသွားတယ်ပေါ့လေ .. သူက လက်ဆော့ခြေဆော့ရှိလို့ ပစ္စည်းတစ်ခုကို ခိုးဝှက်လိုက်တာ ကိုယ်မြင်ရဲ့သားနဲ့ … သူ့ကို မယူနဲ့ပြန်ချလိုက်ပါ မကောင်းပါဘူးလို့ … လူကြားထဲ မပြောတာ ၊ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်လိုက်တာ … သတ္တိမရှိလို့မဟုတ်သလို … သူခိုးအားပေးချင်လို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး ။ ကိုယ်ပြောလိုက်လို့ .. သူ အရှက်ရသွားမှာစိုးတာကြောင့် ၊ ကိုယ့်ကို တသက်လုံးသူမျက်နှာပူနေရမှာ .. စတာတွေကြောင့်ပေါ့လေ … ။
ကျွန်မပြောချင်တာက … အမှန်ကိုမြတ်နိုးပြီး … မှန်တာပြောရဲတဲ့ သတ္တိရှိတိုင်းလည်း … နေရာနဲ့ အချိန်ဒေသကိုလိုက်ပြီး ..အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် …အမှန်တိုင်း ထုတ်မပြောဖြစ်တာလေးတွေ၊ ထုတ်မပြောသင့်တာလေးတွေကို နှိုင်းယှဉ်ပြတာပါ … ကိုကြည်လွင်ရေ .. မှန်တိုင်းသာ ထုတ်ပြောရမယ်ဆို … အသက်ပျောက်တာ ကြာလှပေါ့လေ .. ဟိဟိ
သိပ်လည်းမကြောက်ပါနဲ့ကွယ်။ ဒီ ဒကာမလေးများက အင်မတန်ကြောက်သကိုး။ ကြောက်တတ်ရင် လွဲ ရဲရင် မင်းဖြစ် တဲ့။
ကြောက်တတ်ရင် ရန် ကင်းတယ်လို့လည်းပြောကြသေးတယ်။
သင် ဟာ တစ်စုံ တစ်ခု ကို လိုချင်ရင် ဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့တော့ အပ်ခ်ျလောင်း ဆိုပြီး မရဘူးကွဲ့။
မီးမီးတို့က လိုတော့လိုချင်သား ပြောရမှာကြောက်တယ်တော့မလုပ်နဲ့နော်။
ဥပမာ ပြန် ရေးထားတဲ့အထဲက စာလေး ကောက်နှုတ်မယ်နော။
အမှန်တရားအတွက် ထက် ကိုယ့်မိတ်ဆွေဆိုရင် ပိုလို့တောင် ပြောသင့်ပါသေးတယ်။ မှန်တာပြောလို့ သူမခေါ်မှာ မိတ်ပျက်မှာ စိုးရိမ်စရာမှ မလိုပဲလေ။ သူ့ တမျက်နှာကြည့်ပြီး အမှန်တရားကို မျက်ကွယ်ပြုတာ သူ့ကိုဖျက်ဆီးရုံတင်မက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပါ တန်ဖိုးမဲ့အောင်လုပ်လိုက်တာပဲ။
အမှန်တရားအတွက် အသက်ပျောက်ခံတဲ့သူတွေရှိခဲ့လို့ ရှိနေလို့သာ ခုလို အခြေအနေထိရောက်လာတယ်ဆိုတာတော့ လက်ခံတယ်မို့လား။ ဒီတော့ အိတုန်လေးတို့က ကြောက်တတ်ရင် တိတ်တိတ်လေးနေနော်။ တို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောခဲ့တဲ့ စကားကိုတော့ က ဖျက် ယ ဖျက် မလုပ်နဲ့ကွဲ့။
”လူမှာအရေးကြီးဆုံးက ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးမှုဘဲ ဖြစ်တယ်၊ အခြေအနေ အချိန်အခါ နေရာဌါနမရွေး မှန်တာကိုသာ ပြောဝံ့တဲ့ သတ္တိရှိရမယ်။”
ဒီလိုစကားပြောခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကို အားနာဖို့ကောင်းတယ်။
လူတွေ ယဉ်ကျေးမှုကို ဘာလို့ သင်ယူရလဲဆိုတော့ မလုပ်သင့် မလုပ်အပ် တာတွေကို
ရှောင်ကျဉ်နိုင်ဖို့ ယဉ်ကျေးမှုကို သင်ယူကြရတယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတခုထဲ
ကိုယ့်အတ္တ တခုထဲ ကြည့်ပြီးလုပ်ချင်ရာလုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ ကိုယ်လိုချင်ရာကို
တို့များအားလုံး သဘောတရားတွေထက် လက်တွေ့ လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့က အဓိက မို့လား။
လူ ဆိုတာ ကိုယ့်အဆင့်အတန်းကို ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ပဲ သတ်မှတ်တာပါ။